ओली सरकारको एक वर्ष : गफ समृद्धिको, अर्थतन्त्र धराशायी (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
ओली सरकारको एक वर्ष : गफ समृद्धिको, अर्थतन्त्र धराशायी (भिडियोसहित)
चौतर्फी ओरालोमा आर्थिक सूचकहरु
१. व्यापार घाटा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको ५ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहीं अवधिमा ४ खर्ब १८ अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बढी व्यापार घाटा हो । जुन २६.११ प्रतिशत बढी हो । व्यापार नाफा÷घाटा आयात र निर्यातको अनुपातमा विश्लेषण गरिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ निर्यात घट्नु र आयात बढ्नु हो ।
२. ३१ अर्ब शोधनान्तर घाटा
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ८५ अर्ब रुपैयाँ शोधान्तर घाटा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहीं अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । शोधान्तर नाफा÷घाटा देशमा भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तरका आधारमा विश्लेषण हुन्छ ।
३. विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थिति करिब उस्तै
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहीं अवधिमा १० खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा स्िरञ्चति भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३.३ प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित मुद्राले ९ महिनाको लागि आयात धान्न सक्नेछ । तर अघिल्लो अर्थिक वर्षको यही समयसम्ममा भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले झण्डै १३ महिनाको आयात निर्यातलाई धान्न सक्थ्यो ।
४. वैदेशिक लगानी पनि घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहीं अवधिमा ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ कम हो । यसले विदेशी लगानीकर्ताले वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको संकेत गर्छ ।
५. रेमिट्यान्स चाहिँ बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ३ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहीं अवधिमा २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ९१ अर्व रुपैयाँ बढी हो । रेमिट्यान्स भनेको रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पठाएको रकम हो । यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्रा ४० प्रतिशतले घटेको छ । यसले आगामी आर्थि वर्षमा रेमिट्यान्स पनि घट्ने निश्चित छ ।
६. राजश्व संकलन निराशाजनक
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा ३ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म चार खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसक्नुपथ्र्यो ।
७. विकास बजेट खर्च गर्न सकेन
३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास खर्चमध्ये चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको २२ प्रतिशत मात्रै हो । यसले विकास बजेट खर्च गर्न सरकार कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ । र, यसवर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ ।
८. सेयर बजारको अवस्था नाजुक
अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको सेयर बजार दिनहुँजसो खस्कँदो छ । डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि नै सेयर बजारमा खासै सुधार आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि सेयर बजारलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । जसकारण सेयर बजारका लगानीकर्ता रुष्ट छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँच महिना र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्रायः आर्थिक परिसूचक ओरालो लागेको छ । व्यापार घाटा र शोधान्तर घाटा बढेको छ । विदेशी लगानी घटेको छ ।
सेयर बजारको स्थिति नाजुक छ । जसले आमनागरिकमा सरकारप्रति निराशा बढाएको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदा पनि आर्थिक परिसूचक ऋणात्मक हुनुको कारण र यसले पार्ने प्रभावबारे अर्थमामिलाका जानकार अच्युत वाग्लेको विश्लेषण यस्तो छः
स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण भएन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सरकारलाई पत्याएन
कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएन
सूचकांक सुधार्ने प्रयास नै कम भयो
अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले संभावना पहिचानसमेत हुन सकेन